I-Karma Tantric • Ukugcotshwa komzimba ne-NuRu Massage
I-Original Tantric Massage eLondon
Zizwa i-Classic Tantric Massage eyiqiniso, indlela eyimfihlo ye-tantra edluliselwe ezizukulwaneni eziningi. IClassic Tantric yethu ukubhucungwa kwemvelo okuphetha ngokuqhuma kwamandla, kulandelwe ukukhululeka okuhle komzimba nengqondo.
Isiko elihle lezinkanuko elinezinzuzo eziningi zomzimba nezingokwengqondo, ama-masseuse ethu akhethekile aseLondon azokwamukela endaweni yokugcina eyimfihlo, ezungezwe amakhandlela nomculo opholisayo. Izwa i-tantric massage yokuqala yasendulo futhi udedele izingcindezi zakho zibe olwandle lwamafutha afudumele esikhunjeni sakho.
Shayela uKarma Tantric ku-0207 898 3212
I-massage yethu ye-tantric yakudala isikhumba esigcwele esikhumbeni esivusa imithambo yomzimba sisebenzisa amafutha we-massage afudumele wenyama
Ukuthanjiswa komzimba okugcwele okuqala ngemivimbo emide egelezayo yokusiza ukungezwani, okuholela esiphethweni esijabulisayo sokuqhuma kusetshenziswa izindlela zangempela ze-tantric.
Ama-masseuse ethu ahlinzeka ngokungena emafulethini abo ngokunethezeka kulo lonke elaseCentral London noma ukukhala ehhotela lakho laseCentral London noma endaweni yokuhlala yangasese. Buka i- Ikhasi lezindawo ukuthola uhlu lwezindawo esizihlanganisayo.
Amanani amaLadies ayahluka futhi atholakala kumaphrofayli abo ngamanye.
Ulayini wethu wokubhuka uvulwe kusukela ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo phakathi kuka-9 ekuseni no-1 ekuseni. Uma ukhetha ungasithumelela i-imeyili, iWhatsapp, iSkype, noma usebenzise eyethu ifomu contact ukungena ukuxhumana.
Monday: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM
NgoLwesibili: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM
ngoLwesithathu: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM
ULwesine: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM
Friday: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM
NgoMgqibelo: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM
NgeSonto: Ngo-8: 00 AM – 10: 30 PM